सरकार भन्छ,’दूधमा नुन, साबुन र युरिया हल्ला मात्र’ – NewsAgro.com
June 28, 2018 June 28, 2018 newsagro0Comments 'दूधमा नुन, सरकार भन्छ, साबुन र युरिया हल्ला मात्र'
काठमाडौं । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ९ प्रतिशत योगदान रहेको दुग्ध क्षेत्र यतिबेला विवादमा तानिएको छ । दूधमा कोलिफर्म, सोडा, युरियाजस्ता पदार्थ पाइएको भन्ने समाचारले एकातिर उपभोक्ता त्रसित बनेका छन् भने अर्कातिर दूध बिक्री घटेको भन्दै उद्योगले दूध लिन कम गरेपछि किसानले सडकमा दूध पोख्नेसम्मको अवस्था आएको छ । नेपालको कृषिक्षेत्रमा यो नयाँ कुरा भने होइन । कृषक, उद्योगी र उपभोक्तासमेतमा हलचल ल्याउने गरी पाँच वर्षअघि पनि कोलिफर्मबारेको यस्तै समाचार आएको थियो ।
यस पटक डेरी अनुगमनमा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री आफैं गएपछि उठेको दूधको गुणस्तरको विषयले नेपाली समाजमा ठूलो स्थान पाएको छ । के नेपालको दूध खान लायक नै छैन ? खाद्यान्नजस्तै दूध पनि अब आयातमै निर्भर हुने हो त रु सरकारले समस्या मात्र देखाउने हो कि अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्सा जोगाउन पहल गर्ने हो रु यस विषयमा मुख्य तीन प्रश्न बहसका विषय हुन् ।
कृषि मन्त्रालय मातहतको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले हरेक वर्ष दूध, पानी र अन्य खाद्य पदार्थको नमुना संकलन गरेर प्रयोगशाला परीक्षण गर्दै आएको छ भने परीक्षणमा दूधमा कोलिफर्मको मात्रा भेटिँदै आएका छन् । ७० डिग्री तापक्रममा तताएमा कोलिफर्मले स्वास्थ्यमा हानि नगर्ने भनाइ खाद्य वैज्ञानिकहरूको छ भने नेपालमा दूध नतताएर खाने प्रचलन नै देखिँदैन ।
तर, यस पटक नै किन यति धेरै विवादमा तानियो यो क्षेत्र रु कहिले दूध पुगेन भनेर आयात गर्ने र कहिले बढी भयो भनेर मिल्क होलिडे गर्ने तर कहिले गुणस्तर भएन भनेर उपभोक्ता तर्साउने गतिविधि हुनु नेपालको दुग्ध क्षेत्रमाथिको नियोजित आक्रमण भएको उद्योगी तथा उपभोक्ता अधिकारकर्मीको भनाइ छ । वार्षिक १९ लाख मेट्रिक टनको उत्पादन बजार रहेको, कम्तीमा साढे ४ लाख किसान लाभान्वित रहेको यो क्षेत्रको समस्या मात्र देखाएर सरकार र सरोकारवाला पन्छिनु अर्थतन्त्रमाथिको बेवास्तासमेत हो ।
यद्यपि उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्ने अधिकार कसैलाई छैन नै । सरकारले नै ल्याएको गोठदेखि ओठसम्म दूध मूल्य श्रृंखलामै सुधार गरे मात्र स्वच्छ दूध उपभोक्तासम्म पुग्न सक्छ भन्ने बुझाइ सबै सरोकारवालाको छ । दुध उद्योगी पछिल्लो अनुमगनलाई नेपालको दुग्ध उद्योग तहसनहस गरेर आयाति दुध बजारमा भित्र्याउने खेल भनेर आलोचना गरिरहेका छन् । पाँच वर्षमा कृषि क्षेत्रको उत्पादन दोब्बर बनाउने योजनमा रहेको सरकार आत्मनिर्भरउन्मुख दुग्ध क्षेत्र विगार्न आफै किन लाग्छ रु प्राविधिक रुपमा गुणस्तरको अवस्था के हो रु यस क्षेत्र पछिल्लो समयमा उठेको दुग्ध क्षेत्रमा गुणस्तरको सवालमा सरोकारवालाको बुझाइ र समस्या समाधान गरेर अर्थतन्त्रलाई समेत जोगाउँदै स्वच्छ दूध उपभोक्तासम्म पु¥याउन निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकामा केन्द्रित भएर कारोबारकर्मी किरण आचार्यले सरोकारवालासँग गरेको कुराकानीको सार :
‘दूधमा नुन, साबुन र युरिया हल्ला मात्र हो’
दुग्ध क्षेत्रमा अहिले जुन समस्या देखिएको छ । यो विगतदेखिकै समस्या हो । दूधमा खाने सोडा मिसाएको र कोलिफर्म भेटिएको प्रयोगशाला परीक्षणबाट देखिएको छ । तर, यसको अर्थ दूध खानै हुँदैन भन्ने होइन । गर्मीमा दूध फाट्ने सम्भावना हुने भएकाले नफाटोस् भनेर राखिन्छ ।
किसान र संकलन केन्द्रमा पनि रहने सम्भावना हुन्छ । कतिपय स्थानमा दिनमा एकपटक मात्र दूध संकलन हुने भएकाले पनि किसानले खाने सोडा मिसाएको पाइयो
। दूधमा नुन हाल्ने कुरा आएको छ । हाम्रो परीक्षणमा छुट्टै नुनको ढिका वा पोकावाला नुन हालेको भेटिएको छैन । सोडा भनेको पनि, सोडियम बाइकार्बोनेट भनेको पनि एक प्रकारको नुन हो, त्यो भेटिएको हो । साबुन पनि भेटिएको छैन । युरिया पनि हामीले फेला पारेका छैनौं । बाहिर आएको जस्तो छैन । यो अलिक बढी हल्ला भयो ।
अर्को कुरा कोलिफर्मको छ । दूधमा कोलिफर्म जति पनि हुन्छ । दूध दुहुने ठाउँमा पनि हुन्छ, दूध संकलन केन्द्रमा पनि बाहिरी वातावरणबाट दूधमा प्रवेश गरेको हुन सक्छ ।
धेरै कोलिफर्म कच्चा दूधमा छ भने उद्योगमा पास्चराइज हुँदा पनि कोलिफर्म नष्ट नहुन सक्छ । थोरै भए पूरै नष्ट हुन सक्छ । पोष्ट कन्टामिनेसनको सम्भावना पनि हुन्छ । उद्योगमा मेसिनको सरसफाइ, स्टोरबाट पनि कोलिफर्म संक्रमण हुन्छ । वातावरण, पाइपलाइनमा हुन सक्छ । कोलिफर्म विभिन्न किसिमको हुन्छ । इकोलाई अलिक खतरा हो, तर सबै व्यक्तिका लागि खतरा हैन । रोग प्रतिरोधात्क क्षमताअनुसार यसले आक्रमण गर्न सक्छ । दूध, खाने पानी उमालेर खाइन्छ । उमाल्दा कोलिफर्म नष्ट हुने भएकाले दूधमा समस्या हुँदैन । पास्चराइज दूध नतताई खाँदा मात्र समस्या हो । ऐनअनुसार दूधमा हुन हुदैन भन्ने भएकाले हामीले यस्तो दूधलाई दूषित भन्छौं । तर, तताएर खाएमा नष्ट हुन्छ ।
यद्यपि दुग्ध क्षेत्रमा भएका समस्या सुधार गर्नका लागि अनुगमन गर्छौं । नमुना ल्याएर परीक्षण गर्ने काम गर्छौं, गलत देखिएमा कारबाही गर्छौं नै । हामीले गरेको पछिल्लो अनुगमनपछि पनि धेरै सुधार भएको छ । सुरुमा जस्तो सोडाको मात्रा अहिले छैन । धेरैमा घटेको छ । सुधार भएको देखिन्छ । सबै हुनुमा उद्योगको मात्र दोष हुँदैन । संकलन केन्द्रमा विद्युत्को समस्या हुँदा सोडा हालेर फाट्न नदिने काम हुन्छ । यस्तो नहोस् भनेर संकलनकर्ताले कस्तो दूध लिने भन्ने मापदण्ड बनाउँदै छौं ।
परीक्षण गरेर मात्र दूध लिनुपर्छ । कमी–कमजोरी भए दूध फिर्ता गर्ने व्यवस्था गर्छौं । वितरण गर्दा पनि उद्योगलाई आचारसंहिता बनाउँदैछौं । हामीले नियमित काम गरिरहेका छौं । खाद्यमा धेरै कुरा छ । सबैमा काम गर्नुपर्यो । जनशक्ति एकदम न्यून छ, स्रोतसाधन न्यून भएकाले सबैतिर अधुरो खालको काम हुन्छ । अहिले अभियानमुखी गर्दैछौं । दूध, पानी र होटल व्यवसायमा केन्द्रित भएर काम गरिरहेका छौं । आवश्यक मापदण्ड बनाएर लागू गर्ने, अनुगमन गर्ने काम पनि गरिरहेका छौं । दूधको समग्र मूल्य श्रृंखला सुधार गर्ने गरी काम गरिरहेका छौं । अहिले नै सुधार भइरहेको छ । थप सुधार गर्छौं ।
‘किसान पलायन गराउने सुनियोजित षड्यन्त्र’
जन्मेदेखि मृत्यपर्यन्त शरीरलाई आवश्यक पर्ने पोषण दिने पदार्थ हो— दूध । लाखौं किसानको रोजीरोटी पनि दुग्ध क्षेत्रमा छ । अर्बौंको खाद्यान्न आयात भइरहेका बेला स्वदेशमै उत्पादन भएको दूधले हामी किसान, उद्योग र उपभोक्तालाई पनि फाइदा पुगेको छ । यसले अर्थतन्त्रमा पनि योगदान गरेको छ भन्ने सरकारलाई थाहा छ ।
मन्त्रीले अनुगमन गर्नु आफैंमा ठीक हो । तर, अनुगमनमा आएका तथ्यलाई बंग्याएर दिने काम मन्त्रालय मातहतकै निकाय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले गरेको छ । दूधमा नुन, कोलिफर्म के–के छ भनेर रिपोर्ट सार्वजनिक गरेर विभागले के गर्न खोजेको हो रु ७२ घण्टाभित्र आउनुपर्ने रिपोर्ट १५ दिनपछि किन सार्वजनिक गर्यो । यो सरासर नेपाली किसानलाई पलायन गर्ने षड्यन्त्रबाहेक केही होइन ।
दुग्ध क्षेत्रमा गुणस्तरका किसान, संकलन केन्द्र र उद्योगमा पनि केही हुन सक्छन् । त्यसको अनुगमन गरेर सुधार गर्ने काम पनि सरकारकै हो । हामी सुधार गरेर जान तयार छौं, तर खै कहिले यो सुधार गर भनेको छ रु वास्तवमा अहिले १०–१५ दिनयताको समस्या होइन हो । दुग्ध क्षेत्र डुबाउनै खोजिएको हो भन्ने स्पष्ट नै छ । दूधमा नुन भेटियो रे भन्ने खबर आएको छ । नुन मिसाएर दूध ततायो भने दूध फाट्छ अनि किसानले दूधमा जानी–जानी नुन मिसाउँछ रु उद्योगले यसो गर्छ रु सोडा मिसाइएको कुरा पनि छ ।
कतिपय किसानले टाढा संकलन केन्द्रसम्म पुयाउँदा फाट्छ भनेर खाने सोडा मिसाएका हुन सक्छन् । कानुनअनुसार खाने सोडा मिसाउन मिल्दैन, हामीलाई थाहा छ तर कहाँको केन्द्रबाट यस्तो काम भयो रु अनुगमन गरेर सुधार्नुपर्यो नि । गुणस्तरीय छैन भने उद्योगीले पनि दूध नलिन पनि सक्छन् । त्यसपछि किसान पनि सच्चिन बाध्य हुन्छन् ।
दिसामा पाइने कोलिफर्म भनेर हल्ला गरेको छ सरकारले, तर कोलिफर्म कहाँ, कसले मिसायो रु विभागले स्पष्ट भन्न सकेको छैन । के विभाग सरकारभन्दा माथि छ ? जिम्मवार हुनु पर्दैन । जब आफू स्पष्ट छैन भने हल्ला फिँजाएर, उपभोक्ता भड्काएर मात्र हुन्छ रु अनुगमन गरेर नाकामै गएर हेरोस् र दूध गुणस्तरहीन छ भने त्यहीं पोखोस् । जबरजस्ती उद्योगलाई मात्र मुछेर समस्या समाधान हुँदैन । दूधमाथिको आक्रमण किसानमाथि पनि हो । गलत नियतले गरिएको काम तुरुन्त बन्द गरियोस् ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि कोलिफर्मको निश्चित प्रतिशतलाई सामान्य मानिएको छ । हामी दूध तताएरै खान्छौं, तताउँदा कोलिफर्मको किटाणु मर्छ भने उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा यसले के असर गरेको छ त रु यद्यपि कानुनअनुसार काम होस् भन्ने हामी पनि चाहन्छौं । अहिले पनि ५० हजार लिटर दूध घटेको छ । भोलि थप घट्दै जाला । सरकारका कारण यो भएको छ, क्षतिपूर्ति पनि सरकारले दिनुपर्छ ।
अहिले आएको नेपाली दूधको गुणस्तरको विषय हौवा मात्र हो । यसमा कृषक र उपभोक्ता आत्तिनुपर्ने अवस्था होइन । नेपाली दुग्ध क्षेत्र धराशायी पार्ने र दूधका पनि मुलुकलाई परनिर्भर बनाउनमा आफ्नो किञ्चित स्वार्थपूर्तिका लागि नीतिगत निकायका अधिकारीदेखि भारतीय व्यापारीसमेत लागिपरेका छन् । भारतको अमूल नेपाल आउने कुरा जब आयो, त्यसपछि नै यो क्षेत्रमाथि नियमित रूपमा आक्रमण भइरहेको छ । भारतबाट दूध, घ्यू र अन्य उत्पादन ल्याउने र नेपाली उत्पादन बन्द गराउने षड्यन्त्र भइरहेको छ । भारतमा रामदेवको घ्यू ८ सय ५० रुपैयाँ प्रतिलिटर पर्छ, तर नेपालमा ७ सय ५० मा कसरी पाइयो रु कहिल्यै सरकारले खोजेको छ रु कि नेपालको दूध खान हुदैन, विदेशको दूध मात्र खानुपर्यो भन्नुपर्यो । हैन भने नेपालको दूधलाई गुणस्तरहीन छ भनेर हल्ला गर्न बन्द गरिनुपर्छ ।
‘कानुनको पूर्ण पालन गरे समस्या नै आउँदैन’
उपभोक्ताको अधिकार हाम्रो संविधानले नै व्यवस्था गरेको संवैधानिक अधिकार हो । उपभोक्ता अधिकार रक्षाका लागि खाद्य ऐन, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, मुलुकी ऐनको ठगीको महल (भदौदेखि नयाँ आउँदैछ) र कालोबजारी ऐन मुख्य कानुन पनि छन् । अहिले नेपालमा कानुनी शासन होइन, कानुनद्वारा शासन छ । त्यसैले उपभोक्तासँग जोडिएका मुद्दा छरपस्ट रूपमा उठ्छन्, तर कुनै टुंगोमा पुग्दैनन् ।
कानुन एउटा मन्त्रालयको मन्त्रीले चलाउन चाहे चल्ने र नचलाउन चाहे नचल्ने विषय होइन । कानुन चलायमान हुनुपर्छ अनि मात्र उपभोक्ता अधिकारको रक्षा हुन्छ ।
दुधमा गुणस्तरको विषय अहिलेको जल्दोबल्दो विषय हो । यसले उपभोक्तामा एक खालको त्रास छ । हामीले दूध खान हुने कि नहुने त रु उत्तर पाएका छैनौं । तर, जहाँसम्म यससम्बन्धी खबर बाहिर आएका छन्, अलिक बढी हल्लाका भरमा आएजस्तो लाग्छ । किनकि उही विभागले गरेको अनुगमनबाट सबै डेरी उद्योगका कारबाही हुने खबर पनि हामीले पढेका छौं, फेरि उद्योगलाई कारबाहीको आधार छैन भन्ने खबर पनि हामीले पढेका छौं । अब कुनलाई विश्वास गर्ने रु अन्योल त हुन्छ नै ।
सरकारले यसरी उपभोक्तालाई अन्योलमा राख्नु पनि अधिकारको हनन हो । खास समस्या के हो ? अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ल्याब छ । परीक्षण गरेर सही प्रतिवेदन निकाल्नुपर्यो र समस्या समाधानमा कानुनी बाटोमा अगाडि बढ्नुपर्यो । मन्त्रीज्यूलाई अनुगमन गर्न मन लाग्या बेला गर्यो, उपभोक्ता तर्सायो अनि मन्त्रीले चासो नदिएपछि मतलब नगर्ने कहाँको कानुनी शासन हो ?
बर्सेनि अनुगमनका खबर आउँछन्, तर कतिले कारबाही भोगे त रु उत्तर नियामक निकायसँग छैन । कतिपय अवस्थामा नियामक निकायले नै उद्योगीहरूलाई थर्काएर पैसा झार्न पनि अनुगमन गरेको घटना हामीले देख्दै आएका छौं । कतिपय उपभोक्ता अधिकारकर्मीको खोल ओढेर पनि यस्ता मुद्दा बाहिर ल्याउन लागेका हुन्छन् भने सञ्चारमाध्यमको आडमा आचारसंहिता पालना नगरी गरिने गतिविधिले पनि समस्या ल्याउँछ । एक उपभोक्ता अधिकारकर्मीको हैसियतमा म सरकारलाई उपभोक्ताको अधिकारमा गम्भीर बन्न आग्रह गर्छु । दूधमा देखिएको समस्या किसान सचेतना, सहकारी सचेतना र उद्योग तथा उपभोक्ता सचेतनाले पनि कम गर्न सकिन्छ । यसमा पनि सरकारको ध्यान जाओस् । कानुनमा कमजोरी भए संशोधन गरियोस्, तर कानुनको पालनामा गम्भीर बनौं ।
← पोखराको रोपाइँ महोत्सवमा १० देशका पर्यटक सहभागी हुने
विभिन्न कार्यक्रमका साथ राष्ट्रिय धान दिवस मनाइदैं →
September 24, 2017 newsagro 0